Uma umdwebo wokuhamba ngezinyawo uqala ukunyamalala ebusweni, isithandwa semoto sibuza ukuthi amasondo ahlala yini kule nkathi. Kunendlela yokuyisimangaliso yokwandisa impilo yerabha ephazamisekile ngosizo lwezinyathelo zokusika amathayi.
Thetha idivayisi yokusika
Ngempela, ukunyathelisa amathayi ngezandla zabo kuyinkqubo elula. Kuye, kuye kwasungulwa amadivayisi akhethekile - abakwa-machine-regrollers. Zonke zilayisensi. Ungakhetha idivayisi efanelekayo intengo.
Amashini ashibhile ahlonywe ngamasethi amancane futhi awavikelekile ekushiseni okukhulu. Yenzelwe ukusebenza kuphela ngezimoto zenjoloba. Zincane futhi zihlangene. Azisetshenziselwa iziteshi zesevisi.
Izinsimbi ezibiza kakhulu sezivele zibhekwa njengezobuchwepheshe. Ngokwemvelo, zibiza kabili ngaphezulu, zinezicucu ezicebile zama-blade kanye ne-transformer enamandla. Yilokho futhi bayisebenzisela ezitolo zokudoba.
Benza imishini eChina, eU.SA, eTurkey. Okuthandwa kakhulu kukhishwa eJalimane naseFrance.
Labo abangenaso isithakazelo sokuhambisana nenqubekela phambili basebenzisa isiBulgaria, isisel noma insimbi yokuxubha. Ngale ndlela, umvikeli wajuliswa ekuthuthweni kweloli, lapho kwakungeyona into ehlukile kulezi zixhobo.
Ukunyathela nini kungamukeleki?
Imfucumfucu yezimoto zabagibeli (ngaphandle kwabekiwe ngokukhethekile) ayihambisani nokubuyiselwa. Futhi yingakho:
Amathayi wezimoto zomgibeli ayenawo ungqimba owengeziwe werabha. Ukujula ngaphakathi kulowo mnqamuki, ungalimaza kalula intambo. Ngemuva kwalokhu, isondo ngeke likwazi ukusetshenziswa futhi ngeke lihlwithwe. Umqondo wokwenza amathayi asebusika kusuka emathayi ehlobo kungabangela ukuqhuma kwesondo nengozi.
Ngisho nomvikeli oyinqunyiwe, ithayi eliye lashiya isikhathi salo ngeke lihlale lithembekile futhi linwebeka njengasekuqaleni. Amaphanga nezindawo ezibomvu ezindaweni ezihlangene - uphawu olucacile lokuphela kwenkonzo yakhe.
Iziphi amathayi abuyisela?
Abantu abathanda imoto baphikisana kakhulu ngokuthi ngabe kuyadingeka yini ukukhipha isondo, noma kunalokho-kungenziwa. Nazi izibonelo zamacala lapho ungaba khona ngempela:
Esikhatsini kukhona ukumaka kwe-Regrovable or U. Lezi zimpawu zisho ukuthi umenzi wenza ukonga olungeziwe lwerejubha phezu kwentambo, engasondiswa ngokusika.
Cishe wonke amathayi we-cargo anezingqimba ezinjenge-raba, ezingabuye zibuyiselwe.
Isondo elinokujula okujwayelekile, ukulungiswa okudlule kanye nokwenyuka. Kulesi simo, umdwebo uvele ubuyiselwe yi-patch. Inqubo enjalo ingenziwa noma isiphi isondo.
Amathayi asebusika ajwayele ukushayela komgwaqo, ukusika ingxenye yephethini ngomshini wokubhala.
Esikhathini sokususwa kwe-weld umcibisholo ungqimba we-rubber, ngaleyo ndlela ukwandisa ubukhulu besondo kuya ezingeni elimukelekile. Kakade kusendlalelo esisha sinquma. Lokhu kubuyiselwa kuyodala, kepha uma isondo singaphuli, kuyamukeleka.
Njengomthetho, ngemuva kokuvuselela umsebenzi, i-raber isebenza enye ingxenye yesithathu kusukela esikhathini esidlule.
Umshini wokusika amathayi wezinyawo ngezandla zakho - ithuluzi kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Kuthatha kuphela ikhono elincane. Sithatha isondo, esingabuyiselwa futhi siqhubeke:
Sifunda i-rubber. Senza isiqiniseko sokuthi sinokumaka okudingekayo (Okungahle kusetshenziswe noma U). Khona-ke, ngezinkomba zokunquma, sinquma ukuthi kuyadingeka yini ukufeza inqubo.
Uma kunesidingo, sisusa i-raber kusuka ku disk bese siyihlanza ngokuphelele kusuka kokungcola, ishlabathi namatshe. Sihlola umkhiqizo ngaphakathi: akufanele kube khona umonakalo. Uma kungenjalo, ithayi lingabuyiselwa kuphela esitolo sesondo.
Sithola ingxenye eboshiwe yesibalo futhi sibone ukujula kokunyathela. Uma i-rubber ihlunga ngokungafani, sizozama ukuqinisekisa ukuthi inkomba yokujula iyayifana yonke indawo - okungenani i-3 mm.
Sithatha umshini wokusika umthamo wamathayi bese ufaka kuwo umucu ohambisana nobubanzi bephethini.
Siqala ukusika. Ukunyakaza okumnyama kususa amapheshana cishe ubude obuyi-15 cm.
Ukuphunga kwenjoloba yokushiswa - okusheshayo ngokushesha noma ukunciphisa amandla edivaysi (uma umlawuli otholakala kuwo etholakala).
Sika izicucu ebusweni.
Ngemuva kokuba umvikeli ebuyiselwe, sihlanza zonke izindawo zokudla kanye ne-lamellas (ungasebenzisa ibhulashi).
Faka ithrekhi kokubili kokugxila kwangaphambili nangemuva.
Ukunyathela ukusika amathayi kuthandwa kakhulu. Ngeshwa, le ndlela ivame ukubuyisela injoloba, engafaneleki lokhu, ibeka engozini bonke abasebenzisi bomgwaqo. Uma uthenga isondo elisetshenzisiwe, kufanelekile ukuhlola ngokucophelela.
Meaning of "glanders sokuthula '. cwaningo Quick
Ngiyinika kanjani ukushintsha ngemvume ukuze Skype, uma ubudala ukhathele?
UCaptain Obvious: usephendukele kuphi futhi ngubani?